ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | Linqing Meifule Precision Bearing Co. , Ltd.
Linqing Meifule Precision Bearing Co. , Ltd.
(LINQING MEIFULE PRECISION BEARING CO ။ , LTD) ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနက်ရှိုင်းသော groove ball bearings, pillow block နှင့် taper roller bearings များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၀ ယ်သူပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်နမူနာအရအထူးဝက်ဝံများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ စက်ရုံအားယခုအခါစက်မှုလုပ်ငန်းဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။ စက်မှုဇုန်တစ်ခုလုံးသည် ၈၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းပြီးအပြည့်အ ၀ bearing bear ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပြီးအဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်။
စက်ရုံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ပြီးရောင်းအားအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုအတွက်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီ (XIAMEN PRIDE BEARINGS CO ။ , LTD) ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့သည်အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများနှင့် Xiamen မြို့တွင်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်လုပ်ဆောင်မှုများမှပြီးပြည့်စုံတဲ့ကွင်းဆက်ကိုပြုလုပ်ပါ။
ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်နက်ရှိုင်းသော groove ball bearings များပြုလုပ်ထားခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ စက်ရုံသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ခေါင်းအုံးကိုစတင်ထုတ်လုပ်သည်။ သံနှင့်သံမဏိပစ္စည်းများမှသည်သံချေးအိုးများနှင့်အပြီးသတ်ဝက်ဝံအထိကုန်ကြမ်းများနှင့်ကုန်ကြမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတင်းကျပ်စွာသိုလှောင်ထားခဲ့သည်။ တင်ပို့။ ထို့နောက်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောပြေးသူကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်သေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ဝက်ဝံနှင့်စက်မှုနယ်ပယ်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောဗဟုသုတရှိရမည်။ ထို့နောက် ၀ ယ်သူအတွက်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးပေးနိုင်သည်။
200 နှင့် 300 စီးရီးများအတွက် 1. ယူနစ်ဝက်ဝံ UC, UK, SA, SB
2. သံသတ္တုအိုး P, F, FL, T, FA, FB, FC, HA စသည်စသဖြင့်
၃။ နက်သော groove ball bearing (သေးငယ်သောအရွယ်နှင့်အလယ်အလတ်အရွယ်) လက်မ (သို့) မက်ထရစ်ဖြင့်
4. လက်မနှင့်မက်ထရစ်စီးရီးများတွင် Taper roller bearing (အရည်အသွေး P0 အထက် - P6 တန်း)
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သမာဓိရှိမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အရည်အသွေးကို ဦး စားထားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးမူဝါဒဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့်တိုး။ ချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကပို ဦး တည်ခြင်းနှင့်ဆောင်သောလယ်ပြင်၌ပို။ ကြီးထွားလာချင်ပါတယ်။
ချစ်ခင်ရပါသော ၀ ယ်သူအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။